यी ५ महिलासंग भुलेर पनि नराख्नुस स म्बन्ध ! « गोर्खाली खबर डटकम
यी ५ महिलासंग भुलेर पनि नराख्नुस स म्बन्ध !
२०७७ फाल्गुन २ गते आइतवार प्रकाशित
एजेन्सी । पुरुषहरु स्त्रीहरुसँग स म्बन्ध राख्न लालायित हुन्छन् । विवाहित र अविवाहित दुवै खाले पुरुषमा महिलाहरुको निकट हुने चाहाना उत्तिकै हुन्छ । तर सबै महिलासँग पुरुषले सम्बन्ध राख्नु उचित हुँदैन । यहाँ पुरुषले निकट संबन्ध राख्न नहुने स्त्रीहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सके सम्म पुरानो सम्बन्धलाई नखोतलेकै राम्रो हुन्छ । किन भने प्रेमिका पूर्व प्रेमिका बन्नु भनेको सम्बन्ध राम्रो नभएर टुङ्गिएको अर्थ लाग्छ । कतिपय सन्दर्भमा तपाइँ र उनीबीच गम्भिर समस्या भएकै कारण सम्बन्ध टुटेको हो । कुनै समस्या पर्दा वा दुःख लाग्दा पूर्व प्रेमिकाको सम्झना आउनु फरक कुरा हो तर उनलाई पुनः जीवनमा तान्नु पश्चातपका कारण मात्र बन्न सक्छ ।
मिल्ने साथीकी बहिनीः
आफ्नो मिल्ने साथीकी बहिनीसँग नजिकिने भुल कहिले पनि नगर्नुस् । यसले तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध मात्र धरापमा पार्दैन यसले आफ्नी सानी बहिनीलाई धोका दिएको भन्दै अनुहारमा मुक्का खाने खतरा समेत बढाउँछ । बहिनीसँगको निकटताले तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध पनि फिका हुन्छ ।
कुनै पनि महिला जसको विषयमा तपाइँले निरन्तर नकारात्मक समाचार मात्र सुन्नु हुन्छ उनीसँग पनि नजिकको सम्बन्ध नराख्नुस् । सामान्य सम्बन्ध राख्न यस्ता महिला काम लागे पनि गम्भिर सम्बन्धले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
धनी खोज्दै हिँड्ने केटीः
धनी केटाको खोजीमा भौतारिने केटीसँग पनि नजिक नभएकै राम्रो । धनी खोज्ने केटीसँग डेट जान रमाइलो भएपनि लामो सम्बन्ध बनाउनु आफूलाई समस्यामा पार्नु जस्तै हो ।
साथीकी पुर्व प्रेमिकाः
यदि तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध मूल्यवान छ भने उसकी पूर्व प्रेमिकासँग नजिकिनुस् । यो साथीसँगको सम्बन्धप्रतिको इमान्दारिता पनि हो । यसले तपाइँको छविमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ भने साथीबीच नै दुस्मनी हुने खतरा समेत रहन्छ ।
चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदै एमाले, भोलि दलको बैठक बस्दै
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका बिरामीको भिडियो एक्सरे हेर्दा डाक्टरकै होस उड्यो